Fanaraha-maso momba ny vatosoa : « tsy maintsy mila manova fomba fiasa », hoy ny minisitra | NewsMada
Maro ny ezaka miandry momba ny fampanarahan-dalàna, ny ady atao amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena ambanin’ny tany. Nasian’ny minisitra Zafilahy Ying Vah teny izany, ny herinandro lasa teo, nandritra ny fizarany « nofon-kena mitam-pihavanana » amin’izao fetin’ny faran’ny taona izao.
Satria nahitam-pahombiazana ny amin’ny volamena ataon’ireo mpitrandraka madinika, izay traikefa no hoentina amin’ny fanaraha-maso ny fitrandrahana vatosoa. Maro ny fitrandrahana tsy ara-dalàna momba ny fikarohana vatosoa, izay mitaky ezaka goavana ny atao amin’izany amin’ny taona 2018 miaraka amin’ny police des mines. « Ampahany maro amin’ny vokatra vatosoa aondrana an-tsokosoko any ivelany. Ny ezaka natao amin’ny volamena tokony ho hita any amin’ny fitrandrahana vatosoa », hoy ny minisitra. Notsiahiviny fa « fanambin’ny minisitera ny hoe mampidi-bola, noho izany, tsy maintsy mila manova fomba fiasa ».
Ao anatin’izay rafitra fanarenana sy fanaraha-maso izay ny fametrahana Bam (1) any amin’ireo faritra betsaka trandrahina, volamena na vatosoa. Apetraka any amin’ireny toerana ireny koa ny BCMM (2). Manampy ireo ny asan’ny police des mines. Tsy vitsy amin’ireo manana karatra fahazoan-dalana mitrandraka ny tsy mampiasa izany mivantana ho azy fa hitadiavam-bola amin’ny endrika hafa, hamidy na hampanofaina.
2.730 t ny volamena naharaisana fanambarana tamin’ity taona ity. Io ny be indrindra hatramin’ny taona 1960, efa nisy fotoana tsy naharaisana afa-tsy 50 kg. « Nahitam-bokatra tsara izany ny volamena amin’ny fanarahan-dalàna, tombontsoan’ireo mpitrandraka madinika sy ho an’ny fanjakana, saingy mbola tsy ampy. Mbola ao ireo mpitrandraka minia tsy manao tatitra mihitsy », hoy ihany ny minisitra Zafilahy Ying Vah.